Eventbrite + Teespring: Tengesa T-Shirts Nematikiti Ako | Martech Zone
Eventbrite + Teespring: Tengesa T-Shirts Nematikiti Ako
China, April 28, 2016 Chishanu, April 29, 2016 Douglas Karr
Isu tinoshanda kwegore mumhanzi uye tekinoroji mutambo muIndipolis gore rega rega. Icho chiitiko chikuru patinounza matunhu mabhendi uye tinotora zuva rekupemberera kukura kwedunhu pamwe nekuunganidza imwe mari yeiyo Leukemia & Lymphoma Sosaiti.
Sangano redu ndiro rinotsigira chiitiko, uyezve isu tinowanzo tora mamwe makambani kubhadhara mari yekuwedzera. Zvinosuruvarisa, zvakadaro, mari yekutsigira inowanzo kupinda muminiti yekupedzisira… isingasiye nguva yekuronga zvakawandisa!
Ndatenda kunaka kwetekinoroji, zvakadaro! Gore rinouya, tichave tichichinjisa chiitiko kuronga zvishoma uye kutora zvakanyanya kuzvidzora. Imwe pfungwa huru yatinoda kuzadzisa ndeyechokwadi mukana wekubatanidza kutengesa kwetikiti redu pamwe chete nechiitiko t-shirts. Eventbrite uye Teespring iva negadziriro chete sisitimu. Ingo wedzera iyo Teespring App kune yako chiitiko uye kumisikidza yako t-shati.
Kubatana kweChiitikobrite naTespring kunoita kuti iwe ukurumidze kuisa mifananidzo pazvinhu zvekutengesa, isa mutengo wako, uye nekukurumidza gadzira peji repamhepo panogona kutenga nevanoenda uye mafeni kubva. Zvako zvekutengesa zvinobva zvasimudzirwa pane yako yechiitiko peji.
Pese paunoda kuti mushandirapamwe wako upere, Teespring inodhinda, kurongedza uye kuendesa ese maodha kune vatengi vako pasirese. Shingairira nevanopinda uye uzviedze!
Kuzivisa: Izvo zvedu Eventbrite Referral Chirongwa kubatana.
Tags: kunyoresa chiitikochaitikamitamboMerchandisekutengesa zvinhut-shirtwemakokomatikiti
3 Mazano ekuSmartter Kushambadzira Technology Investments
Maitiro Ekutumirazve iyo Yakagadziridzwa kana Nyowani Robhoti.txt Faira